I-Tresdpro R1, iphrinta elisebenza ngemvelaphi yaseSpain | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Umhlaba wamaphrinta we-3D ushintshe kakhulu eminyakeni yamuva. Njengoba ubuchwepheshe butholakele futhi bafika emadeskini ethu, amamodeli akhona wamaphrinta e-3D abekade ekhawulelwa kumamodeli amathathu okuphathelene namamodeli amaningana wesiko avela kuphrojekthi yeRepRap noma eyaziwa nangokuthi yiClone Wars.
Kungakho kukuhle ukuhlangana nezinhlobo ezintsha zamaphrinta we-3D njengomkhiqizo weTresdpro, iphrinta yeTresdpro R1 iphrinta esezingeni eliphezulu ebukeka njengephrinta yasekhaya.
I-Tresdpro R1 iphrinta eyenziwe ngokuphelele eSpain, hhayi ngeze, inkampani, ITresdpro, idabuka eLucena (eCórdoba). Kungenzeka ukuthi iphrinta yokuqala ye-3D yenziwe ngokuphelele eSpain, uma singazinaki izinhlobo zeClone Wars ezakhiwe ngabasebenzisi ngendlela ecishe ibe ngobuciko.
Izilinganiso zeTresdpro R1 zingama-22 x 27 x 25 cm. embozwe ngohlaka lwensimbi ne-methacrylate okungagcini nje ngokushisa nokushisa okuzinzile ngesikhathi sokuphrinta kepha futhi kusebenza njengokuvikela abasebenzisi futhi kuvimbele umsindo ongacasula.
1 ITresdpro R1 izokwazi ukudala izingxenye ngezinto ezimbili ngaphandle kokumisa isikhashana ukuphrinta
2 I-Raspberry Pi 3 B + ubuchopho beTresdpro R1
ITresdpro R1 izokwazi ukudala izingxenye ngezinto ezimbili ngaphandle kokumisa isikhashana ukuphrinta
Ukubukeka kweTresdpro R1 kungahle kujwayelekile ngenxa ye- Isikrini sokuthinta esingu-5 intshi imodeli enaso enkabeni yesakhiwo se-cubic, kepha iTresdpro R1 hardware ayijwayelekile kakhulu kubaphrinta be-3D. ITresdpro R1 inobuchwepheshe be-DEM, ubuchwepheshe obuthi iqukethe i-extruder ezimele evaliwe kabili lokho kuzosivumela ukuthi singagcini nje ngokubonisa okuphelele kepha futhi nokwenza izingcezu ngezinto ezahlukahlukene nemibala. Le extruder ingasebenzisa izinto ezahlukahlukene ngoba ivuma kuze kufike emazingeni okushisa ama-degree angama-300.
Ubukhulu bezendlalelo ezenziwe i-extruder buzohluka phakathi kuka-0,3 mm no-1 mm, kuya ngosayizi esimaka ngesoftware yokuphrinta. Okusho ukuthi izingcezu ezidaliwe, ngaphezu kokuba nesiphetho esihle kakhulu, zingaba namandla futhi zizinzile.
Ngokwesici sesoftware, okuthile okuya ngokuya kube khona ngaphakathi kwamaphrinta e-3D, iTresdpro R1 ayikude kakhulu, inesoftware yesimanje futhi evuselelwe. Ngaphezu kokuba nesikrini sokuthinta, umsebenzisi angakwazi lawula iphrinta ye-3D usebenzisa ikhompyutha noma i-smartphone. Konke ngenxa yesoftware esekwe ku-Astrobox Desktop. Isoftware ephethwe yibhodi yeHardware Hardware, iRaspberry Pi 3 B +. Isoftware ye-Astrobox Desktop izovumela ukusetshenziswa kweselula njengenye idivayisi, ngaphezu kwekhompyutha noma ilaptop yakudala ejwayele ukuhambisana nalawa madivayisi, kusuka kuwo ukwenza amamodeli nokuphrinta ngqo.
I-Raspberry Pi 3 B + ubuchopho beTresdpro R1
Amafu nezinqolobane zewebhu kungenye ingxenye ebalulekile yale software. Lesi isici esisha esithandwayo emakethe yephrinta ye-3D amaphrinta ambalwa anikezela kubasebenzisi bawo. Lesi sici sinika amandla ukuphrinta kwe-3D ngqo kusuka endaweni yomphakathi noma ekhoselweni lewebhu. Akunasidingo sehadiwe yangaphandle, kuphela ngesikrini sephrinta uqobo kusukela I-Astrobox inikeza ithuba lokuxhumana nezinqolobane ezidumile ezifana neThingiverse. Ukuxhumana kwe-Wifi nangamadrayivu e-USB nakho kukhona kule phrinta ye-3D, izici eseziyimisebenzi eyisisekelo futhi amaphrinta amaningi esingawathola emakethe asevele enazo izinyanga.
Iphrinta yeTresdpro R1 iyatholakala kwa- iwebhusayithi esemthethweni. Intengo yeTresdpro R1 ingu-2.499 euros, intengo ephezulu uma ucabangela amaphrinta ukuthi singazakhela thina, kepha kunengqondo impela ngemodeli yephrinta ye-3D. Yize futhi kuyintengo amaphrinta wokuqala we-3D ayenayo, ngakho-ke uma sibusebenzisa ngempela lobu buchwepheshe, intengo ingaba nengqondo impela.
Mina ngokwami ​​ngiyakukholwa lokho iphrinta yeTresdpro R1 inikeza ithuba lokuba nezixazululo zobungcweti ezweni lasekhaya yize kufanele sisho ukuthi imodeli enjalo yokuphrinta ingeyabasebenzisi abafuna ngenkani futhi abahlala njalo emhlabeni wokuphrinta kwe-3D
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-Tresdpro R1, iphrinta yobungcweti enemvelaphi yaseSpain
Ungayenza kanjani ibhokisi le-jukebox elenziwe ekhaya futhi elenziwe ngezifiso